ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com သူငယ်​ချင်း ​မေ​မေ
​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ဘဝမှာတခါမှမကြားဖူး မမြင်​ဖူးမ​တွေးဖူးတဲ့အလုပ်​တခုလုပ်​မိတယ်​ လိုင်း​ပေါ်မှာ သူစိမ်း​ကောင်​​လေးနဲ့ sex ချက်​တယ်​ဆိုလားဘာလာ လုပ်​မီတယ်​ ရင်​​တွေခုန်​တာခုထိမ​ပျောက်​​သေး လိုင်း​ပေါ်က ​ကောင်​​လေးလီးကြီးကလဲ အမ​လေး နည်းတာကြီးမဟုတ်​ဘူး အပြင်​မှာ သာတကယ်​အလိုးခံလိုက်​ရရင်​​တော ​တွေးရင်​​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ရန်​​တွေခုန်​​နေတာဘဲ ​ကောင်​​လေးပို့​ပေးထားတဲ့သူလီးဓာတ်​ပုံ​တွေကလည်​ ရှိ​သေးတယ်​ ကြည့်​ချင်​စိတ်​အရမ်းဖြစ်​လာမိတယ်​ ​တော်​ပြီ​တောပြီ ငါ​တောမလွယ်​​တောဘူး ကိုယ်​ကိုကိုယ်​ ပြန်​ပြီးထိန်း​နေရတယ်​ ကိုမြင့်​​ထွေးက​တော ကားပွဲစားတန်းသွားပြီ ​ဈေးကသွားရ​တောမည်​ ​ဈေးချင်း​လေကိုင်​ပြီထွက်​လာခဲ့တယ်​ ဟာလာပြီဟ ​စော်​ကြီ ​နေရဲ​ စော်​ကြီးလာမဲ့ လမ်းက​နေလမ်းကျုံသလိုလိုနဲ့ ​နေရဲကလည်း​ဈေးခြင်း​လေးကို လက်​တဖက်​နဲ့ကိုင်​​မောင်းရင်း '' တီးတီး '' ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​​ရှေ့ကလမ်း​ရှောက်​သွား​နေတာ ဖင်​ကြီးက အ​ပေါ်​အောက်​ နှိပ့်​တုန်​မြင့်​တုန်​နဲ့အ​ပေါ်စည်းချက်​ကြကြ လှူပ်​ခါ​နေတယ်​ ဝတ်​ထားတဲ့တမိန်​က အ​ပျော့သား အနက်​​ပေါ် ပန်းပွင့်​​လေး​တွေစိထားတယ်​ အင်္ကျီက အဖြူ ​ဖျော့​ဖျော့​လေးဝတ်​ထားတယ်​ ​နေရဲ ​နောက်​က​နေဆိုင်​ကယ်​ဟွန်းတီးလိုက်​​တော ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုက လည့်​အကြည့်​
'' ဟယ်​ သား မင်း​ဈေးသွားမလို့ဘဲလား''
'' ဟုတ်​အန်​တီ တက်​သွားမယ်​​လေ ''
​နေရဲ​နောက်​က လိုက်​ရတာ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ရင်​​တွေခုန်​​နေမိတာ​တောအမှန်​ဘဲ​လေ ​ကောင်​​လေးက သူမအ​ပေါ်မရိုးသားဘူးဆိုတာသိ​ပေမဲ့ အဲ့ဒါ​လေးကိုသာယာမိတာကို ဟွန့်​​တွေ့မယ်​ ကလိလိုက်​ဦးမယ်​ ​နေရဲ ခါး​လေးကိုလူပြက်​တဲ့​နေရမှာဖတ်​သလိုလိုပြုတ်​ကြမှာစိုးသလိုလိုနဲ့ တချက်​တချက်​လူပျက်​တဲ့​နေရာမှာ​နေရဲ့ခါး​လေးကို ဖတ်​ထားလိုက်​တယ်​ လက်​က ဖတ်​ထားရင်း လျှာပြီ ​နေရဲ လီးကြီးနဲ့တ​ဖြေး​ဖြေးချင်​ထိလုလုဖြစ်​ဖြစ်​လာတယ်​ တချိန်​ထည်းမှာဘဲ ​နေရဲ့ က ဆိုင်​ကယ်​ကို လမ်းဂျှိုမ့်​ထည်းချ လိုက်​​တော ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ ရဲ့ လက်​က ​နေရဲ လီးကြီးအ​ပေါ်ကို​ရောက်​သွားတယ်​ ရုပ်​တရက်​ဆို​တေယ ​ဒေါ်နွယ်​ချို နည်းနည်းလှန့်​သွားမိသည်​ လက်​ကို ချက်​ချင်းပြန်​ပြီရုပ်​လိုက်​တာ​ပေါ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ထူပူသွားတာဘဲ ​သေ​သေချာချာကြီးကိုလီးနဲ့ထိမိတာ ဟို့ အိမ်​​ထောင်​သည်​ဆို​တောလီးအ​ကြောင်း​ကောင်း​ကောင်​သိသည်​ သူမ ဒီလီးကြီးဘယ်​​လောက်​ရှိမယ်​ဆိုတာကို​တော မှန်းမိတာ​ပေါ မသာ​လေးက အတွင်းခံဝတ်​မလာပြန်​ဘူး သူမ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးက မနက်​ကတည်းက ​စောက်​ရည်​​တွေကလည့်​​နေတာ အခုလီးနဲ့ထိမိ ရင်​ကလည်းခုန်​ ဟူး '' သား အ​ရှေ့မှာ ရပ်​လိုက်​ဦးအန်​တီနွယ်​ ခဏ ဝယ်​စရာရှိ​သေးတယ်​ ''
'' အပြန်​ကြဝင်​ပြီးမဝယ်​​တောဘူး အခုတခါတည်း ဝင်​ဝယ်​သွားရ​အောင်​ ခဏ ​နော်​သား '' '' ဟုတ်​တီနွယ်​ '' ဆိုင်​အ​ရှေ့ရပ်​​ပေးလိုက်​​တော သူမဆိုင်​ထည်းဝင်​သွား​တော ​နေရဲအ​နောက်​က​နေသူမ ဖင်​အိုကြီးကိုကြည့်​လိုက်​​တော အ​နောက်​သူမှဖင်​ကြီးမှာ စိုတိုတို​လေးဖြစ်​​နေတာကိုမြင်​လိုက်​မိတယ်​ ဟာ ​စော်​ကြီးထ​နေတာဟ လမ်းမှာငါ့လီးကိုသူလက်​နဲ့ကိုင်​မိလို​နေမယ်​ ဟင့်​ဟင့်​ ​တွေ့ကြ​သေးတာ​ပေါ တီနွယ်​ ရယ်​ ဒီလိုနဲ့ မနက်​တိုင်း ​နေရဲ့နဲ့ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ​ဈေးသွားတိုင်​ အတူသွားဖြစ်​ကြတယ်​ နွယ်​လည်း ခါတိုင်းထက်​ပိုပြီအလှပြင်​လာမိတယ်​ ဆိုတာကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ သတိ​တော ထားမိပါရဲ့ တခါတခါများ ​ယောက်​ကျားသိမှာ​တောင်​​ကြောက်​လာမိတယ်​ fb လည်းမဖွင့်​ဖြစ်​ဘူး​လေ '' နွယ်​ အလှ​တွေပြင်​လွန်း​နေပြီ​နော်​ မင်း'' '' မိန်းမဘဲ ကိုမြင့်​​ထွေးရယ်​ လှချင်​တာ​​ပေါ '' '' ​အေးပါ ငါဘာသံမှမကြားချင်​ဘူး​နော်​ '' ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​​ပေမဲ့ စိတ်​ကလည်းမခံချင်​စိတ်​က​လေးကလည်းရှိ သူခိုးလူမိဆိုသလို​ပေါ ရှက်​ရှက်​ရမ်းရမ်း ​တောသည်​|| '' ​နေပါဦး အကျွန်​မ က ဘာဖြစ်​​နေလို့လဲ '' ``​အေး ငါသတင်း​တွေကြားပြီးပြီ ကွ မင်းဟိုချာတိတ်​နဲ့ မဟုတ်​တာ တခုခုလုပ်​​နေတာမဟုတ်​လား ​ပြော​လေ´´ `` အို့ ရှင်​က ကျွန်​မကို အရှက်​ခွဲ​​နေတာလား ကိုယ့်​သားအရွယ်​နဲဖြစ်​စရာလားရှင်​´´ `` ကျွန်​​မ တို့ကရိုးသားလို့ ရပ်​ကွက်​ထည်းမှာ​ပေါ်တင်​သွားတာ​လေ ´´ အ​မေနဲ့အ​ဖေစကားများ​နေတာ​ကြောင့်​ ကို​ထွေး စိတ်​ရှူပ်​ရူပ်​နဲ့အပြင်​ထွက်​လာခဲ့​လေသည်​ ကြာရင်​သူ့ကိုပါ မဲ​တော့မယ်​ဆိုတာသိပြီသား ဒါ​ကြောင့်​ လမ်းထိပ်​​လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​ထွက်​သည်​ ၊၊ `` ဟိုက်​ ဘဲကြီး လာပြီဟ ´´ `` ​အေးအိမ်​မှာ ဘွား​တော်​နဲ့ ​ဘိုး​တော်​ စကားများ​နေလို့ကွာ ´´ `` ဟင်​ ကို​ထွေးဘာလို့လဲ ကွီ´´ ​`` ပြသနာ က​တော မင်းငါ့အ​မေကို​ဈေးကိုလမ်းကြုံ​ခေါ်သွားတာကို ဘိုး​တော်​က ​ပေါက်​တာ​ဟေး ကြာရင်​ငါ့ပါ မ​အေ ​ဈေးသွားတာ သားကလိုက်​မပို့ရ​ကောင်းလားဆိုပြီ ပြသနာရှာမှာစိုးလို့´´´
`` Srooy ကိုကြီး​ထွေညီ​လေးက တကယ်​ ​စေသနာပ အကိုရယ်​ ´´
အင်း ငါ​တော ​စော်​ကြီးကိုစားရဖို့​ဝေးပြီထင်​တယ်​​ ​နေရဲ ​တွေးပူ​နေတယ်​ မစားရဘဲ​စောက်​ရှက်​​တော ကွဲ​တောမှာဘဲကွာ `` ငါသိပါတယ်​ငါ့ညီရာ မင်းစိတ်​ဓာတ်​ကို ´´ `` ခက်​တာက အိမ်​က အ​ဖေက အသက်​ကြီးမှအ​မေ့ကို သ၀န်​တို​နေတာကွ ´´ ​`` ဟုတ်​ အကို ညီသွားရှင်းပြရင်​ရမလား အကိုလည်းသိပါတယ်​လို့​ပြောရင်​​ရော ဦး​လေးကို​လေ ´´ `` ဟ လီးဘဲ ဘယ်​ရမလဲကွ မင်းက ငါ့ပါ အိမ်​က​နေ​မောင်းထုတ်​​အောင်​လုပ်​​နေတာလား´´ '' ထားပါ​တော ဒါနဲ့ မင်းအခု ​ဈေးမသွားဘဲ ဘာလုပ်​​နေတာလဲ ​နေရဲ '' '' အင်​ ညီ​လေး ဒီ​နေ့မသွားဖြစ်​ဘူး ကိုကြီး​ထွေး အ​မေသွားမှာ​လေ '' ထိုစဉ်​​နေ ဟန်းဖုန်းမှာ အာဇာနီ သချင်း ​လေးနဲ့ ဖုန်းဝင်​လာသည်​ ​နေရဲ့​ကောက်​ကြည့်​လိုက်​​တော ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ဖုန်း ကို​ထွေးက​တောမသိ သူအာယုံက ​တော်​​တော်​ ရူပ်​​ထွေး​နေပုံနဲ့ လက်​ဖတ်​ရည်​ဆိုင်​မှပြ​သော်​ အင်္ဂလိပ်​ ဇတ်​ကားကြည့်​​နေ​လေသည်​ ​နေရဲ ဆိုင်​အပြင်​ထွက်​ပြီ '' ဟယ်​လို '' ''.....'' '' ဟုတ်​အန်​တီ သား အပြင်​မှာ ကို​ထွေးက ဆိုင်​ထည်းမှာ '' '' ဟုတ်​ သူမသိဘူးအန်​တီဖုန်းဆိုတာ '' '' .....'' '' ဟုတ်​အန်​တီ ခုလာပြီ​နော်​ ​စောင့်​​နေ'' ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို သူကို ချိန်းတာ ဘာလို့လဲမသိဘူး တခုခု​တောတခုခုဘဲ ရင်​တထိတ်​ထိတ်​​တောဖြစ်​သား '' ကိုကြီး​ထွေ ညီ​လေးသွားစရာရှိ​သေးလို သွား​တောမယ်​ '' ကို​ထွေးကို နုတ်​ဆက်​ပြီး ထွက်​လာခဲ့သည်​ ကို​ထွေးကိုနုတ်​ဆက်​ထွက်​လာ​ပေမဲ့ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​​တောမလုံဘူး​ပေါ​လေ အခုသွားရမှာကလည်း သူအ​မေက ချိန်းလိုက်​တာ​လေ ပြီး​တော ကို​ထွေးကိုလည်းအသိမ​ပေးနဲ့ အန်​တီဆီကို သားတစ်​​ယောက်​ထည်းလာခဲ့ဆို​တော နည်းနည်း​တော စဉ်းစားရကျပ်​သွား​ပေမဲ့ ဆင်​အရိပ်​ပြ​နေတာ ကိုယ်​ ကျွဲထင်​ရ​အောင်​ ငတုံးမှမဟုတ်​တာ ​နေရဲ ဆိုင်​ကယ်​​လေး​မောင်းပြီထွက်​လာလိုက်​သည်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ချိန်းတာက ဟိုဘက်​ရပ်​ကွက်​ ​နေရဲတို့ဘက်​ ရဲ့ တရပ်​ကွက်​​ကျော်​ က လမ်းခြား​လေးကို​လေ ​ဟော ​တွေ့ပါပြီ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို အဝတ်​ထုတ်​နဲ့ ကြည့်​ရတာ အိမ်​​ပေါ်ကဆင်းလာတယ်​ ထင်​တယ်​ ​ယောက်​ကျားနဲ့စိတ်​စိုးပြီ ​နေရဲ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ​ရှေ့ကို ဆိုင်​ကယ်​ ရပ်​လိုက်​တယ်​ ဆိုရင်​ဘဲ '' ကြာလိုက်​တာ ​နေရဲ ရယ်​ အန်​တီမင်းကို​စောင့်​​နေတာ ကြားလှပြီ '' '' ဟုတ်​ သား ဟိုဘက်​က​နေ ပတ်​လာခဲ့တာ အန်​တီ '' '' သား တ​နေရာရာကိုသွားရာ​အောင်​ အန်​တီ အိမ်​​ပေါ်က ဆင်းလာတာ အမ အိမ်​ဆိုပြီ '' အင်​​ပြောမယ်​သာ​ပြောရတာ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ​ယောရ်​ကျား လုပ်​သူ ရွဲချင်​စိတ်​နဲ့ ထွက်​လာခဲ့တာ အခု ​နေ့လည်​ 12. နာရီ​တောင်​ရှိ​နေပြီ ဘယ်​သွားရမှန်း​တောမသိဘူး မထူးပါဘူး တည်းခိုခန်းတခုခုမှာ ခဏ သွား​နေမယ်​လို့ စိတ်​ဆုံဖြတ်​ချက်​ချလိုက်​ပြီ ​ကောင်​​လေးကြည့်​ရတာလဲ ဒီ​နေရာမှာ ​ကောင်​​လေးကို ​မျော်​မ​နေ​တောဘဲ သူဘာသာ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ချက '' သာ ​နေရဲ အန်​တီကို ​ချောင်​ကြကြ တည်းခိုခန်းကိုလိုက်​ပို့​ပေးပါလား '' '' ဟုတ်​ရပါတယ်​ အန်​တီ တိုဘယ်​လိုဖြစ်​ကြတာလဲ ကျွန်​​တောကို​ပြောဦး​လေ '' '' အဲ့ဒါ​တွေ ဟို​ရောက်​မှ အန်​တီ သားကိုရှင်းပြမယ်​ ကဲ့အခုသွားစို့ '' သီရိစံအိမ်​ တည်းခိုခန်းကို ​ခေါ်သွားလိုက်သည်​ လူလည်းရှင်းတယ်​ အထူးသဖြစ်​ မှတ်​ပုံတင်​မလိုတဲ့ တည်​ခိုခန်း​ပေါ အချိန်​ပိုင်း​လေ​တွေနဲ့​နေတာများတယ်​​လေ အဲ့​နေရာက ​နေရဲ သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​​ပြောဖူးတာနဲ့ပို့မယ်​​ပေါ ​စော်​ကြီးက ​နေရဲခါးကိုအ​နောက်​က​နေ ဖတ်​ပြီလိုက်​လာသည်​တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ ကိုယ့်​အ​တွေးနဲ့ကိုဆို​တောလည်း စကားမ​ပြောဖြစ်​ပြန်​ဘူး ဟို​ရောက်​​တော အခန်းက နှစ်​​ယောက်​ခန်းယူလိုက်​တယ်​ ​စော်​ကြီးက နှစ်​ခန်းဘဲယူမယ်​​နော်​ဆိုပြီသူဘာသာ​ပြောပြီသူ့ဘာသာယူလိုက်​ဝည်​ အခန်​ထည်း​ရောက်​​တော '' ဟူး စိတ်​ညစ်​တယ်​​နေရဲ ​ရေး အန်​တီစိတ်​ညစ်​တယ်​ '' '' ဟုတ်​အန်​တီ​ပြောပါ ကျွန်​​တောကိုရင်​ဖွင့်​​လေ အန်​တီ '' မိန်းမ ဆိုတဲ့အမျိုးကလည်း သူမျက်​ရည်​ကြ​လေ​လေ ​ယောက်​ကျားသားက ​ချော့ရင်​ပိုပိုကြတက်​တာကိုး ​စော်​ကြီးကခုတင်​မှာ ထိုင်​ပြီ ကြိုက်​ငို​နေတယ်​ ​နေရဲလည်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့​ဘေးနာ ဝင်​ထိုင်​ရင်​ ပုခုံး​လေးကို ​လေက​လေးတင်​ပြီ '' မငိုပါနဲ့ အန်​တီရယ်​ သားတစ်​​ယောက်​လုံးရှိပါတယ်​ အားမငယ်​ပါနဲ့​နော်​ '' '' ဟဟင့်​ အင့်​ '' ​နေရဲက ​ချော​နေရင်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုမှ ​နေရဲ ရင်​ခွင်​ထည်းကို​ခေါင်း​လေ တိုး​ဝေ့ ​ပေါ '' သား ရယ်​ မင်းဦး​လေးက အန်​တီကို မဟုတ်​တာ​တွေနဲ့ စွတ်​စွဲလွန်းတယ်​ ပြီး​တော​လေ '' တန့်​သွားရင်​ ငို့ရှိက်​သံ​လေးက ထွက်​ထွက်​လာတယ်​ ​နေရဲက ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ကို ခါး​လေးကိုပွတ်​သက်​​ပေးရင်းနဲ့ ကျွန်​​တောရှိပါတယ်​အားမငယ်​ဖို့တဖွဖွ​ပြောရင်​လက်​က ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ ရဲ့လက်​ဂျိုင်းကြာက​နေ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ရဲ့နို့ကြီးတဖက်​ကိုအသာ​လေ မထိ တထိလှန်းပွတ်​​နေတယ်​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုတ​ဖြေး​ဖြေးနဲ့အငိုတိ်​တ်​သွားရင်း အသက်​ရူသံပြင်းပြင်းကိုကြား​နေရတယ်​ သူရင်​ခွင်​ထည်းမှာ ​ခေါင်း​လေငုပ်​ပြီငြိမ်​​နေတဲ့​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့နဖူး​လေးကို ဖွဖွ​လေးနမ်းလိုက်​​တော ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ နုတ်​မှ အို့ ဆို​သော်​အသံနှင်​အတူ ​နေရဲ ခါး​လေးကို သူခါး​လေးလိမ်​ပြီ လက်​နှစ်​ဖတ်​နဲ့ တင်းတင်း​လေဖတ်​​နေတယ်​ ​နေရဲနဲ့ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုက ​ဘေးတ​စောင်းအ​နေထားနဲ့ ကုတင်​အစွန်​ဘက်​မှာအတူထိုင်​​နေတဲ့အ​နေထားဆို​တော ​နေရဲလည်​ ရဲတင်းလာတယ်​ ​နေရဲဘယ်​ဘက်​လက်​တဖတ်​က ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ ရဲ့ ကိုယ်​လုံးကို လိုက်​လှန်​ပွတ်​သက်​ရင်​က
'' ချစ်​တယ်​ မ ရယ်​ ''
'' အို့. ဘာမှန်းလဲမသိဘူး လူဆိုး အခွင့်​​ရေးအရမ်းယူတယ်​ ''
'' ချစ်​ခွင့်​ပြုပါ​နော်​မ ''
'' မသိဖူးကွာ ''
မသိဖူးကွာသာ ညှု တူ့တူ​လေး​ပြော​လေသည်​ ​နေရဲက ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ ​ခေါင်း​လေကိူဆွဲ​မော့ရင်​ သူမ ရဲ့​ဖွေး​ဖွေးဖြူ​နေတဲ့ပါးပြင်​​လေးက ၁၆ နှစ်​သမီး​လေးတစ်​​ယောက်​လို ရှက်​​သွေး​တွေဖျာ​နေတယ်​ ဖူး​နေတဲ့ နုခမ်းထူထူ​လေးက ​နေရဲကိုစိန်​​ခေါ်​နေသ​ရောင်​န့ ​နေရဲစိတ်​​တွေရ ထိန်းမရ​တောဘူး သူအရမ်းလိုးချင်​ နမ်းချင်​​နေတဲ့နုခမ်း​လေးကို ဖိစုပ်​နမ်းပြစ်​လိုက်​တယ်​
အွမ့်​ခနဲ့ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုအသံထွက်​နိုင်​​တောသည်​ သူမှကလည်​ က​လေးတစ်​​ယောက်​အ​မေ အိမ်​​ထောင်​သည်​ တစ်​​ယောက်​ဆို​တော ​နေရဲ အနမ်း​တွေကိုပြန်​လည်​တုန့်​ပြန်​အနမ်း​တွေ​ပေး​နေမိတယ်​ ​နေရဲလက်​​တွေက ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ရဲ့ ကြီးမားထွားကြိုင်းပြီ အိ​နေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်​လုံးကို တဖတ်​တချက်​စိဆုပ်​နယ်​ကစား​ပေး​နေရင်​ အားမရစွာနဲ့ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို အင်္ကျီကို ချွတ်​​ပေး​နေမိတယ်
​ '' မ အင်္ချီ​တွေချွက်​လိုက်​​တော ​နော်​မ ''
'' အင့်​ '' ဒါဘဲ တလုံးထည်းဘဲ လူချင်းခွာပြီ နှစ်​​ယောက်​လုံး အသက်​ရူသံ​တွေ ပြင်းပြ​နေမိသည်​ တ​လောကလုံးကို​မေ့​နေကြတယ်​ သူတို့ကမ္ဘာ​လေးမှာသူတိုနှစ်​​ယောက်​ဘဲရှိတာ​လေ. ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို အင်္ချီချွတ်​​နေချိန်​မှာ ​​နေရဲ ကူချွတ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ဖွေးပြီ ​သွေး​ကြောလေး​တွေစိမ်း​နေတဲ့ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို နို့နှစ်​လုံးက ​နေရဲကို မှင်​သက်​မိန့်​​မော​စေတယ်​ အနက်​​ရောင်​​ဘောလီ​လေးက လိုက်​ဖတ်​စွာရှိ​နေတယ်​ ​နေရဲ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုကို ပတ်​လက်​​လေးဖြစ်​သွား​အောင်​လုပ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုအ​ပေါ်ကိုနေရဲ အ​ပေါ်ကအုတ်​မိုးလိုက်​ရင်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုနုခမ်း​လေးကိုနမ်းရှိက်​ရင်​ သူလက်​​တွေက​နိုကြီးအ​ပေါ်ကို​ရောက်​သွားသည်​ အလွန်​နုညမ်​ပြီ ဆုပ်​နယ်​ရသည်​မှာအားရစရာ​ကောင်းလွန်းလှတယ်​ ​နေရဲပုဆိုးဝတ်​ပြီ ​အောက်​ခံ​ဘောင်းပြီဝက်​မလာခဲ့ဘူး ​နေရဲလီးကြီးက ​တောင်​တင်း​နေပြီ တချက်​တချက်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ ချိုေ​ပာင်​ ကိုထောက်မိ​တယ်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုကလည်း​အောက်​က​နေ သူ​ပေါင်​ကိုကား​ပေးလိုက်​​တော ​နေရဲလီးကြီးက သူမ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးကို ​ထောက်​မိ​နေတာ တချက်​တချက်​ တွန့်​သွားမိတယ်​ ​စောက်​ရည်​​တွေကလည်​ အရမ်းထွက်​​နေမိသည်​ သူမ ဒီလီးကြီး​ကြောင့်​ပြသနာ ဖြစ်​ခဲ့တာ ဒီလီးကြီးနဲ့သူအရမ်း ကိုအလိုးခံချင်​​နေပြီ သူမ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးကလည်​ဂုဏ်​ညင်းဖားကြီးလို ​ဖောင်းပြီးမို့တက်​​နေမိသည်​ ​နေရဲ့လက်​တဖတ်​က နို့ကိူဆုပ်​နယ်​ရင်းက ကျန်​လက်​တဖတ်​ဖြစ်​ သူမ ​ပေါင်​ကြားထည်းကို​နေရာ​ရွှေ့လိုက်​ရင်​ သူမ ထမိန်​ကို ချွတ်​လိုက်​​လေသည်​ သူမအလိုက်​တသိ ခါး​လေကြွ​ပေးလိုက်​​တော သူမရဲဖြူ​ဖွေးပြီး​ချော့်​မွတ်​​နေတဲ့​ပေါင်​တန်​ကြီးနှစ်​ခုကြားမှာ ရဲရဲ​တောက်​​နေတဲ့ အတွင်းခံ​ဘောင်းဘီ​လေး​ပေါ်လာသည်​ ​နေရဲလက်​က သူမ​စောက်​ဖုတ်​ကို အတွင်းခံ​ဘောက်​ဘီအ​ပေါ်က​နေ အသာ​လေအုပ်​ကိုင်​ပွတ်​သပ်​​ပေးလိုက်​​တော ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ခန္ဒာကိုယ်​​လေ တချ တွန့်​ခနဲ့ ဖြစ်​သွားသည်​ အရည်​​တွေရွဲ​နေတဲ့ သူမေ​​စာက်​ဖုတ်ကြီးကို​လက်​ခလည်​​လေးနဲ့ မထိတထိ​လေးပွတ်​​ပေးလိုက်​ချိန်​မှာ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့မှာ '' အို့ အဟင့်​ အင်း အား ​မောင့်​ '' ​မောင်​လို့​တောင်​​ခေါ်​နေမိသည်​ သူမ စိတ်​​တွေအရမ်းထန်​​နေပြီ နှါ​ကြီးသူပီပီ သူ အ​မေက ရှမ်းစပ်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ​စောက်​ရည်​​တွေအရမ်းကိုရွဲ ​နေပြီ ​နေရဲက သူမ နို့အုံကိုဖုံးထားတဲ့ ​ဘောလီကို ချွတ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ပြီးသူမ ရဲ့ ​ရွှေကျူပ်​​လေးကိုဖုံးအုပ်​ထားတဲ့အတွင်းခံ ကိုလည်း တပါတည်းချွတ်​လိုက်​​တော သူမမှာ မိ​မွေးတိုင်​ဘ​မွေးတိုင်းပုံစံဖြစ်​၍ သွားသည်​
​နေရဲလည်းသူအင်္ချီကိုချွတ်​သူပုဆိုးကိုလည်းချွတ်​​နေချိန်​တွင်​ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုမှာ မသိမသာ​လေး ​နေရဲ ပုဆိုးချွတ်​​နေချိန်​လှန်းအကြည့်​ အို့ခနဲ့ဖြစ်​သွားသည်​ ​နေရဲ လီးကြီးမှာ သူမ ​ယောက်​ကျား
ကိုမြင့်​​ထွေးလီးကြီထက်​ သုံးပုံ ပုံ တပုံ​လောက်​သာ​နေသည်​သူမ ​ယောက်​ကျားလီးကြီးမှာအရှည်​
၅ လက်​မ ​ကျော်​​ကျော်​ အခု​နေရဲလီးကြီမှ၆လက်​မ ​ကျော်​​ကျော်​ခန်​ရှိပြီအတုပ်​မှာသူမ​ယောက်​​လောက်​ရှိသည်​ ​နေရဲသူမ. ​ပေါင်​နှစ်​လုံးကို ကား​စေပြီ သူမ​ပေါင်​ကြားကို​နေရယူလိုက်​သည်​ ​နေရဲလက်​တဖတ်​က သူလီးကြီးကိုကိုင်​ပြီ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို့ရဲ့​စောက်​ရည်​​တွေရွဲ​နေတဲ့​စောက်​ဖုတ်​ကြီးကိုအ​ပေါ်​အောက်​ပွတ်​ဆွ​နေမိသည်​ အညို​ရောင်​သန်း​နေတဲ့ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ​စောက်​ဖုတ်​မှာ
ရာဂ စိတ်​ ​တွေထကြွလာမိသလို
​နေရဲ လီးကြီးမှာသူမ​စောက်​​ခေါင်းဝနာ​ဖြေး​ဖြေးချင်​ထိ​တွေ့လာမူ့ဟာ ဝူအတွရ်​ သူအရမ်းလိုချင်​​နေတဲ့လီးတစ်​​ချောင်းရသလိုစိတ်​ထည်းမှာအမြန်​ထည့်​​စေချင်​​နေသည်​ ​နေရဲကလည်း သူလီးကြီးကို​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ​စောက်​​ခေါင့်​ဝကို​တေ့ချိန်​ပြီ ​ဖြေး​ဖြေးချင်းလီးကြီးကိုထည့်​လိုက်​​လေသည်​ ​နေရဲ လီးကြီးသူမ​စောက်​​ခေါင်းထည်း ဝင်​လာသည့်​အရသာကို ​ဖြေ​ဖြေချင်းခံစား​နေ​လေသည်​ ​နေရဲမှာလဲ ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချို ကိုလိုးရရဝည်​မှာ စည်းပိုင်​​နေတာဘဲ '' အား​ကောင်းလိုက်​တာ မရယ်​ မ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးက လိုးရအရမ်း​ကောင်းတာဘဲ​နော်​မ အား '' '' အင်​ ​မောင်​ ရယ်​မက အလိုးမခံတာကြပြီ​လေဟွန့်​ '' ​ဒေါ်နွယ်​နွယ်​ချိုမှာ​အောက်​က အလိုးခံရင်း​နဲ့ မျက်​စိ​လေး​မှေးပြီ ကာမ အရသာကို​ကောင်းစွာခံစား​နေ​လေသည်